कसरी पसेकाे थियाे नारायणहिटी दरबारमा बतास ?
January 7, 2022 N88LeaveaComment on कसरी पसेकाे थियाे नारायणहिटी दरबारमा बतास ?
काठमाडाैं । बतास अर्गनाइजेसन नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा एक वर्षअघि गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गरेको थियो । बतास समूहले नारायणहिटी दरबारभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा अनुमति पाएको थियो । १७ पुस ०७७ मा बतास समूहको बिपिएस लिजिङ कम्पनी र संग्रहालय विकास समितिबीच भाडासम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । बतास समूहले नारायणहिटी परिसरको सात रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको भवन […]
ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन ठीक थियो भन्ने प्रमाणित भयो: नेम्वाङ
January 7, 2022 N88LeaveaComment on ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन ठीक थियो भन्ने प्रमाणित भयो: नेम्वाङ
इलाम । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङले सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनको आयू सकिएको दाबी गरेका छन् । एमाले इलामको दशौं जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटनलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष नेम्बाङले सत्ताधारी गठबन्धन विना मुल्य र मान्यताको आधारमा बनेकाले सँगसँगै बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको दावी गरे । पाँच दलीय गठबन्धन दुई मिनेट पनि सँगै बस्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उल्लेख […]
बतास् समूहलाई लखेट्दै सरकार, भएभरकाे बल लगाउँदै आले !
January 7, 2022 N88LeaveaComment on बतास् समूहलाई लखेट्दै सरकार, भएभरकाे बल लगाउँदै आले !
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशालाबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ । पशुपति क्षेत्रमा भएको बद्मासीको छानविनका लागि मन्त्रालयले भरखरै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कोषाध्यक्ष नियुक्त नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो । समितिमा पाँच जना संलग्न छन् । आशा पाण्डे, विश्वकरण जयन तथा देवीप्रसाद बराल सदस्य छन् भने मन्त्रालयबाट […]
मन्त्री आलेले भएभरको बल लगाएपछि जागिर खाइदिने भन्दै बतास समूहले दियो यस्तो धम्की !
January 7, 2022 N88LeaveaComment on मन्त्री आलेले भएभरको बल लगाएपछि जागिर खाइदिने भन्दै बतास समूहले दियो यस्तो धम्की !
काठमाडौं । नारायणहिटी दरबारभित्र निर्माण भइरहेका रेस्टुरेन्ट लगायतका संरचना रोक्न पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले भएभरको बल लगाएपछि बतास समूहले मन्त्री आलेको जागिर खाइदिनेसम्मको धम्की दिएको छ । आफूलाई आनन्द बतासको खास मान्छे बताउने पुडासैनी थरका एक व्यक्तिले मन्त्री आलेको पद खाइदिने धम्की दिएका हुन् । आफ्ना बारेमा देशभरिबाट नै समाचारहरू आउन थालेपछि हच्किएको बतास समूहले […]
कांग्रेसको यस्तो निर्णयले बाबुराम भट्टराई तनावमा !
January 7, 2022 N88LeaveaComment on कांग्रेसको यस्तो निर्णयले बाबुराम भट्टराई तनावमा !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले अब पार्टीका कार्यकर्ताले रुखमा मात्रै भोट हाल्ने बताएका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसको समेत सहयोगमा तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले चुनाव जितेको सन्दर्भमा थापाले यसो भनेका हुन्। कांग्रेस गोरखाको नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले भट्टराईप्रति लक्षित गर्दै यसो भनेका हुन्। केन्द्रमा बाबुराम अध्यक्ष रहेको […]
January 7, 2022 N88LeaveaComment on नारायणहिटी सङ्ग्रहालय परिसरमा बतास समूहले बनाउँदै गरेका संरचना भत्काउन सुरु
काठमाडौं । नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रेष्टुरेन्टका लागि निर्माण गरिन लागेका संरचना भत्काउन सुरु गरिएको छ । रेष्टुरेन्टका लागि बतास समूहले बनाउँदै गरेको संरचना भत्काउन सुरु गरिएको नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय विकास समिति कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार आजदेखि अधिकांश संरचना भत्काइएको छ भने केही भत्काउने तयारीमा रहेका छन् । क्यान्टिन तथा रेस्टुरेन्ट […]
एक्कासी काेराेना बढेपछि ‘स्मार्ट लकडाउन’काे तयारी, कहिलेदेखि लागू हुन्छ ?
January 7, 2022 January 7, 2022 N88LeaveaComment on एक्कासी काेराेना बढेपछि ‘स्मार्ट लकडाउन’काे तयारी, कहिलेदेखि लागू हुन्छ ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरियन्ट संक्रमण बढ्न नदिन उच्च सतर्कता अपनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार अपरान्ह सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) निर्देशक समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले ओमिक्रोन भेरियन्ट संक्रमण बढ्न नदिन र संक्रमितहरुको उपचारमा विशेष ध्यान दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् । […]
ॐ ॐ ॐ प्रसिद्ध सुपादेउराली मन्दिरकाे दर्शन गरी हेर्नुस् पुस २४ गते शनिबारकाे राशिफल !
January 7, 2022 N88LeaveaComment on ॐ ॐ ॐ प्रसिद्ध सुपादेउराली मन्दिरकाे दर्शन गरी हेर्नुस् पुस २४ गते शनिबारकाे राशिफल !
वि.सं. २०७८ साल पुस २४ गते, सन् २०२२ जनवरी ८ तारिक पूर्वभाद्रपदा , ११:२७ बजे उप्रान्त उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र, षष्ठी , १५:४२ बजे उप्रान्त सप्तमी तिथि, करण, तैतिल १५:४२ बजेदेखि गर , २७:३८ बजे उप्रान्त वव, योग वरियान् , १६:५१ बजे उप्रान्त परिघ जान्नुहोस् शनिबार तपाईको लागि कस्तो रहनेछ। मकर राशिका विद्यार्थीहरूले विशेषज्ञ शिक्षकको सहयोग प्राप्त […]
कपडाको मास्कले कोरोनाको ओमिक्रोन भेरियन्टबाट जोगाउँछ? जान्नुहोस् विज्ञहरू के भन्छन्
January 7, 2022 N88LeaveaComment on कपडाको मास्कले कोरोनाको ओमिक्रोन भेरियन्टबाट जोगाउँछ? जान्नुहोस् विज्ञहरू के भन्छन्
ओमिक्रोन भेरियन्ट: कोरोनाको तीव्र गतिमा बढ्दो खतरालाई मध्यनजर गर्दै मानिसहरूको मनमा एउटा प्रश्न छ कि कपडाको मास्कले कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन पर्याप्त छ? जान्नुहोस् विज्ञहरू के भन्छन्। ओमिक्रोन भेरियन्टः विश्वभर कोरोनाको ओमिक्रोन भेरियन्टको संक्रमणका घटनाहरू तीव्र गतिमा बढिरहेका छन्। कोरोनाको तिव्र रुपमा बढ्दो खतरालाई मध्यनजर गर्दै सबकाे मनमा प्रश्न उठेको छ कि कपडाको मास्क नै कोरोना […]
यी हुन् विश्वका अर्बपतिहरुको राशिफल, हेर्नुहोस्
January 7, 2022 N88LeaveaComment on यी हुन् विश्वका अर्बपतिहरुको राशिफल, हेर्नुहोस्
सबैको नजर संसारका धनी व्यक्तिहरूमा छ। उनको विलासी जीवनशैली, विलासी घर, महँगो कार, याट, टापुहरू सधैं मानिसहरूको ध्यान आकर्षित गर्छन्। निस्सन्देह, मानिसहरू तिनीहरू जस्तै धनी हुन चाहन्छन्। बिल गेट्स विश्वका चर्चित अर्बपति मध्येका एक बिल गेट्स हालै आफ्नी श्रीमती मेलिन्डा गेट्ससँगको सम्बन्धविच्छेदका कारण निकै चर्चामा छन् । बिल गेट्सको राशि वृश्चिक राशि हो। रिपोर्टका अनुसार […]